Qatar ga-emepe ihe karịrị ụlọ nkwari akụ ọhụrụ 100 maka FIFA 2022 World Cup
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Qatar » Qatar ga-emepe ihe karịrị ụlọ nkwari akụ ọhụrụ 100 maka FIFA 2022 World Cup
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Pọtụfoliyo 184-ike nke Qatar nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igodo ụlọ 32,000.
Qatar na-akwado njikere ịnabata FIFA World Cup Qatar 2022.
Njirimara ndị na-abịanụ bụ akụkụ nke atụmatụ Qatar iji gbasaa onyinye ya ma gbasaa ndị ọbịa.
Qatar na-agbasawanye njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ya na Qatar National Vision 2030.
Qatar na-agbakwunye ụlọ nkwari akụ 105 na ụlọ nkwari akụ na nnukwu pọtụfoliyo nke akụrụngwa ya, ebe mba ahụ na-akwado ilekọta ya. FIFA World Cup Qatar 2022 ™. Ngwongwo ohuru a ga-agbasawanye arịrịọ Qatar maka ọtụtụ ndị njem ma mee ka ahụmịhe ndị ọbịa ahụ dịkwuo mma, ebe Qatar Tourism na-aga n'ihu na ọrụ ya iji mee ka obodo ahụ bụrụ ebe ụwa na-eduga.
Otu mmeghe ụlọ oriri na ọ recentụ recentụ na-adịbeghị anya bụ Banyan Tree Doha, ụlọ akụ ise nke kpakpando ise, nke onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama amaa ya Jacques Garcia. Lọ nkwari akụ dị na mbara igwe nke afọ a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, Pullman Doha West Bay, ụlọ ise nwere kpakpando ise; JW Marriott West Bay, nke nwere mpi na-adọrọ mmasị ma dị elu; na Steigenberger Hotel, ama ama maka ile ọbịa nke ọma. Oflọ nkwari akụ ọhụrụ ndị a na-enye onyinye pụrụ iche ma ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche nke Qatar nwere pọtụfoliyo 184 siri ike, nke mejupụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igodo ụlọ 32,000.
Otu Qatar Airways Onye isi oche na onye isi oche nke njem nlegharị anya nke Qatar, Mazị Akbar Al Baker, kwuru, sị: “Anyị na-aga n’ihu ịgbasawanye njem nlegharị anya anyị iji hụ na ndị ọbịa ga-enwe ọfụma nke nnabata Qatari ebe ha nwere ike ịhọrọ ụlọ nkwari akụ, ebe ezumike ma ọ bụ ụlọ ọrụ a na-enyefe. na mmefu ego ha na mkpa ha. Njirimara ndị a na-abịanụ bụ akụkụ nke atụmatụ anyị iji gbasaa onyinye anyị ma gbasawanye arịrịọ anyị maka ndị ọbịa. Obi dị anyị ụtọ ịgbasawanye njem nlegharị anya ụwa anyị na-eso Ọhụụ Qatar National 2030 ma nye ndị njem nhọrọ ndị ọzọ iji nweta ihe kacha mma nke Qatar.
Onu ogugu ise emeputara n’oge na-adịbeghị anya Banyan Tree Doha na-enye ndi mmadu okomoko n’ime obodo.
Maka ngwakọta nke ọrụ na egwuregwu, Pullman Doha West Bay nwere ọnụ ụlọ 375 na oke ime ụlọ na ụlọ 93 ga-emepe ma emechaa n'afọ a.
Ndị na-achọ ịchọta echiche nke mbara igwe nke Doha ga-enwe ike ịnụ ụtọ ịnọ na 53-storey JW Marriott West Bay.
Ndị njem na-achọ ebe obibi dị nso ọdụ ụgbọ elu ga-enwe ike itinye akwụkwọ maka ọdịnihu 204-ụlọ Steigenberger Hotel Doha.
Isabelle Cote ekwu, sị:
September 3, 2021 na 16: 29
N'ikpeazụ chọtara ụfọdụ nhọrọ ụlọ oriri na ọ forụ forụ maka Qatar 2022… 4-5 abalị kacha nta… Ha na-achọbu abalị 30 ruo 40 opekata mpe maka iko mba ụwa FIFA. Nke ahụ bụ RIDICOULUS, ha kwụsịrị… http://www.WorldCupStadiumHotels.com , ọ bụghị ọnụ ala mana ezigbo ụlọ oriri dị ọnụ ala karịa ihe ọ bụla ọzọ m hụrụ… 2 afọ na -achọ Doha Hotels… OMG !!!